फेरी पनि किन बनेनन् त केसी मन्त्री ? « Sherpa media Group Nepal
फेरी पनि किन बनेनन् त केसी मन्त्री ?
प्रकाशित मिति : ११ श्रावण २०७४, बुधबार ०९:४५
१० श्रावण – अन्तिम समयमा आएर नेपाली काँग्रेसका बरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल समुहले आफ्ना टीमका नेता बलबहादुर केसीलाई मन्त्रीको सुचिबाट रिङआउट गरेको छ । मन्त्रिपरिषद विस्तारको अन्तिम तयारी भईरहँदा पौडेल समुहको मन्त्री बन्ने सुचिमा रहेका केसीलाई अन्तिममा हटाईएको हो ।
पछिल्लो समय पौडेल समुहमा नजिक रहेर काम गर्दै आएका सोलुखुम्बुबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद केसीले धोका खाएको यो पहिलो पटक भने होईन । केसीले अघिल्लो मन्त्रिपरिषद विस्तारमा पनि मन्त्रि बन्न हदै सम्मको कोशिस गरेको भए पनि पार्टी सभापति देउवाले नरुचाएका कारण मन्त्री बन्न सकेका थिएनन् । यो पटक भने तिब्र चर्चा भए पनि सभापति देउवाको अनिच्छा र केसीको उपगुटकै प्राथमिक्तामा नपरेका कारण मन्त्री बन्न नसकेको काँग्रेस श्रोतले जनाएको छ ।
पौडेल समुह भित्रै रहेर उपगुटको नेतृत्व गर्ने प्रकाशमान सिंहको समुहमा रहेका बलबहादुर केसीलाई सिंहले यो पटक राजन केसी च्याप्दा पनि अप्ठेरो परेको हो । पौडेलका खास मान्छे बन्न नसक्नु र सिंहले पटक पटक उपत्यकालाई प्राथमिक्ता दिनु केसीको दुर्भाग्यको रुपमा विश्लेषण गर्न थालिएको छ । अघिल्लो मन्त्रिपरिषद विस्तारमा पनि सिंहले उपत्यकाकै नविन्द्र जोशीलाई मन्त्रि बनाउन अडान लिए पछि केसी अलपत्र परेका थिए । समग्र राष्ट्रिय राजनिति भन्दा पनि सोलुकै विषयलाई मात्र सधैँ कचमच गरिरहने केसीको प्रबृत्तिका कारण देउवा र पौडेल दुवैको रोजाईमा उनी नपरेको बताईन्छ । सोलुखुम्बुको राजनितिमा देउवा पक्षलाई बडार्ने केसीको रणनिति र प्रयासलाई सभापति देउवाले पटक्कै मन नपराउनु पनि उनी पछि पर्ने कारण रहेको कतिपयको बुझाई छ । कोईराला समुहसँग पनि राम्रो सम्बन्ध स्थापित गर्न नसकेका केसी पछिल्लो समय पार्टीको गुटगत राजनितिमा घरको न घाटको जस्तै बनेको उनी निकटकै नेताहरुले बताउन थालेका छन् ।
केसीलाई मन्त्री नबनाउनुमा स्थानीय तहको निर्वाचनमा सोलुखुम्बुमा काँग्रेसको लज्जास्पद हार पनि कारक रहेको विश्लेषकहरु बताउँछन् । निर्वाचन अघिको काँग्रेस केन्द्रिय समिति बैठकमा केसीले सोलुका ८ वटै ईकाइमा काँग्रेसलाई जिताएर ल्याउने दाबी गर्दै सोही अनुसार अधिकांश आफु निकटका ब्यक्तिलाई टिकट दिएर मैदानमा भिडाए पनि सात वटै गाउँपालिकामा काँग्रेसले हारे पछि केसीको मुल्यांकन केन्द्रले राम्रोसँग नगरेको श्रोतको ठम्याई छ ।
source – himalfm